Ama-10 Overalls wonke owesifazane kufanele acabange ukuthi abekhona ekamelweni lakhe - ama-Buddhatrends
Ama-10 Overalls onke abesifazane kufanele bacabange ukuthi babekhona ekamelweni lakhe
Ama-Overalls, okuyinto eyayisetshenziselwa ukugqoka izingubo zokugqoka eminyakeni yamuva nje yaba yinto eqondile yabesifazane, futhi kancane kancane iba yinto edingekayo kuyo yonke owesifazane owazi kahle imfashini. Manje bafika ngezitayela ezahlukene, ubukhulu, imibala kanye namakhanda afana ne-denim, ilineni, ukotini nokuningi. Zigqoke manje ukuze zivumelane nezinkathi ezahlukene nezinkathi, ngakho-ke zibe yinto enkulu yefashini. Ngezansi izindlovukazi eziyishumi, wonke owesifazane kufanele acabange ukuthi abekhona ekamelweni lakhe.
Ubuhle bengubo yinkambo yokulula ngesitayela. Le ngubo jikelele ye-denim isethelwe ukuba ihlale ivulekile emzimbeni wakho ngaleyo ndlela, ikunike lowo mbono ongavamile. Yenza lokhu ngomusa ngezintambo zayo ze-spaghetti namapokhethi ohlangothini. Ukukufanisa nge-tee emhlophe, ihembe noma i-cami ikunika ukubukeka okuphelele kokubukeka ngaphandle kokukhipha ubuhle bakho. Ukuze unakekele kalula, uyojabula ukuzwa ukuthi lokhu ingubo jikelele i-ankle-ubude, ngezintambo ze-slash kanye ne-waistline yemvelo; ukugxila ekuqapheliseni ukukhokhwa kweholo jikelele ku-panache ehambelana nenduduzo.
Ama-Overalls Over Size:
Kungani ukugqoka okwejwayelekile, lapho ungangena khona umehluko? Lokhu ubukhulu besayizi jikeleleikunika ukubukeka okungavamile okuyisimangaliso nesitayela sayo esiphezulu esibonisa ukuthi ungumnikazi wakho. Ukwengeza ekubukeni okubucayi okuqinisekisiwe kulokhu, kubamba kahle induduzo yakho njengoba kufanelana nawe ngokukhululekile, uqiniseke ukuthi akukho nkinga ehamba ngosuku lwakho. Iphethini iqinile uma ungewona umshayeli wezinkampani eziningi eziphathekayo noma zezimbali futhi zivela ngobukhulu obuvela ku-M-5XL. Kufanele nakanjani ukuba nabe ungicela kimi.
I-Denim Jumpsuit ne-Overen Overalls
I-Denim isibe ulimi lwendawo yonke. Wonke umuntu ugqoka i-denim, eMelika, eYurophu, e-Afrika, e-Asia, yonke indawo, ngakho-ke ngokuqinisekile kufanele abe nayo yonke intokazi. Banikeza ukubukeka komgwaqo ngenkathi beqhubeka nokubukeka bengavamile. Ifuna induduzo njengoba ibhalwe ukuze ikuvumelane ngokukhululekile. Ngokuqinisekile unezandla ezandleni zakho njengalokhu i-denim evulekile jikelele bekuzofakazela ama-tees akho amhlophe nama-blouses ngenkathi emile. Kungabuye kufane nama-cardigans njengama-overalls asebusika.
Lokhu jikelele kukunika ukubukeka kwe-90s ngokuvuna nge-majesticukuthinta isitayela sesimanje, kukushiya ubukeke buhle futhi buhle. Yakhelwe ngamapokheji angaphambili, okulenga ngokukhululekile esifundeni sakho ukuhlanganisa imfashini, induduzo nesitayela. Kuyinto engavamile futhi ikhululekile ngenzuzo eyengeziwe yokukhetha kusuka emibala eyishumi ehlukene ebandakanya omnyama, okwesibhakabhaka nokunye okuningi. Ifuna abesifazane besinezinhlobonhlobo zomzimba ezahlukene njengoba ubukhulu bayo buvela ku-S-5XL. Lezi-overalls ze-90 zabesifazane ziphelele kulobu bukeka obungapheli, kufanele ngempela imali yakho.
Amantombazane othandekayo othandwayo agqoke izingubo ezibenza bazizwe futhi bavele njengamakhosikazi. Leli phepha eligcwele ubude liyingubo eyodwa egelezayo ehambisana neskripthi. Ngomfanekiso wayo onemibala eqinile, kukunika umbono wokubukeka ngenkathi uhlala ungavamile. Lokhu konke kutholakala kalula njengoba kwenziwa ngekotoni ehlala kancane kancane emzimbeni wakho okwenza ukhululekile njengoba ungathola ngenkathi uhamba ngebhizinisi lakho ngengubo egeleza nxazonke zakho. Lokhu akungabazeki ukuthi kufanele ube nakho njengoba kufanelekile ngokugcwele izikhathi eziningi ezifana nosuku ogwini, ukudla okudliwayo nokunye okuningi.
I-Corduroy ingubo eyodwa eyasinda eminyakeni, ukunethezeka nokuqina kwayo yizizathu ezimbili zezizathu eziningi zalokhu. I-corduroy jikelele iyincenye okufanele uyenayo ekhabethe lakho futhi uqinisekise ukubukeka kwe-vintage 90s. Yenzelwe ngamabhodlela aqoqwe futhi izinkinobho, izitayela ezijwayelekile ukuze zihambisane nama-nice tees. Ungeze lokhu ukuze ududuze futhi uqinisekile ukuthi unokuthenga okuningi ezandleni zakho.
Ngalesi sikhathi lapho ama-prints e-denim eba isitatimende esikhulu semfashini, lokhu kuhloswe kwezimbali kubesifazane kuyinzuzo enkulu kunoma yimuphi owesifazane olandela ukuqonda. Esinye sezici ezinhle zama-overalls kubesifazane wukuthi unikeza lokho ukubukeka kwesivuno semigwaqo esivamile. Lokhu jikelele wembali ikhululekile kakhulu njengoba ikhululekile ngokwanele ukuvumela ukunyakaza kwamahhala ngenkathi amabhodlela angase aqoqwe kuze kube yimpumelelo ekubukeni kwakho. Kuyinto isidingo esiqondile kulokhu kuguqulwa kwemifanekiso e-denim, kufanele ucabange ukuzitholela owodwa ukuzamazama.
Umnyama umbala oqhubeka cishe zonke izikhathi futhi nganoma yisiphi ikhodi yokugqoka, ngakho-ke umnyama omnyama kufanele ube nakho. Leli yenziwe nge-denim neyinkomba e-jumpsuit evumelana ngokungenasici futhi ikunika ukubukeka okuhlakaniphile nokubukeka ngenkathi igcina ukuzulazula. Kungaba igqoke ama-nice tees nama-sneakers ukuze akunike umbono omuhle wesitaladi. Kuyinto ekhululekile ukugqoka njengoba ivimba nje ngenhla; okwenza kube lula ukujikeleza ngaphakathi. Le nhlobo enkulu ye-denim iyinto enkulu yokuthenga, thola izandla zakho kuso.
Ubomvu buyintandokazi njengoba ihamba kahle yonke indawo, kube yisixuku noma igumbi. Njengalokhu, i-red jikelele yinto okufanele ixhomeke kuwo wonke amakhemikhali wesifazane. Lokhu kuwuphawu lwangempela lwesitayela, imfashini, kanye nekilasi njengoba lifakwe ngendlela ehamba phambili eyenza kube njalo. Ukuze ubuhle, kunamaphakheji ezinhlangothini ngenkathi ugcwele ubude. Kuyinto ekhululekile kakhulu futhi kulula ukugqoka ngenkathi inikeza umbono omuhle. Zitholele lo mbala obomvu bese uphuma njenge-rose epaki!
Okokugcina, lapha kuvela injabulo ekhethekile yowesifazane. Ngaphandle kwamazwi amancane, i-pink jikelele yiphupho labesifazane bonke. Umbala wenza ubonakale buthaka emehlweni okwamanje ubukhulu obukhulu kakhulu. I-Styled in a jumpsuit, ikunika inkululeko yokuhamba ngokukhululekile ngosuku lwakho ngokukhululekile ngenkathi futhi ube nguMnuz. Ukuthakazelisa eceleni. Yenzelwe i-waistline ejwayelekile, insipho ye-slash ene-midi-ubude.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, lokhu kufanele-kube nama-overalls ayishumi kulabo abathintekayo ngesitayela sabo. Amanye ama-overalls angahlolwa Ama-Overalls Aphuzi, Ama-overalls aphrintiwe, futhi Ama-Overalls aphansi. Njengoba izindlovukazi zifikile ukuhlala emadodeni abesifazane, kubalulekile ukuthi ubambe lesi sigciwane esibucayi futhi ngenxa yalokho, yenze imfashini yakho!